Manambatra hery ireo mpanao gazety, YouTubers, sy ny mpanao politika ao Kolombia mba hanohitra ny famonoana ireo mpitarika ara-tsosialy · Global Voices teny Malagasy
Mihoatra ny 460 ny mpitarika ara-tsosialy nisy namono hatramin'ny taona 2016
Voadika ny 03 Jona 2019 6:36 GMT
Pikantsary tamin'ny lahatsary nanombohana ny fanentanana #ALeaderInMyPlace. Hita ao amin'ny YouTube amin'ny alàlan'ny fantson'i Daniel Samper Ospina.
Youtubers, mpanao gazety ary mpanao politika maromaro no nanambatra hery mba hanohitra ny famonoana tsy ara-dalàna ireo mpitarika ara-tsosialy tany Kolombia amin'ny fanentanana #ALeaderInMyPlace, izay nanokafan-dry zareo ny sehatry ny fampahalalam-baovaony hisian'ny mpitarika iray iharan'ny fandrahonana mba hanoratra na hanandra-peo.
Nanomboka tamin'ny 13 May ny fanentanana, raha navoakan'i Daniel Samper Ospina, mpanao gazety tao amin'ny fantsony Youtube ny lahatsary mozika reggaeton mampiseho ireo mpitarika sosialy sy YouTubers malaza.
Araka ny tatitry ny Biraon'ny Mpanelanelana amin'ny fanjakana sy ny vahoaka ao Kolombia, maherin'ny 460 ireo mpitarika ara-tsosialy maty nisy namono hatramin'ny taona 2016, taona nanasoniavan'ny governemanta Kolombia sy ny FARC, vondrona mpiady anaty akata lehibe indrindra ao amin'ny firenena, fifanekena mana-tantara izay mamarana ny ady naharitra dimampolo taona.
Maro ireo manampahaizana nilaza fa noho fanatanterahana ny fifanarahana tsy araka ny tokony ho izy sy ratsy no mahatonga ny fitomboan'ny herisetra, no mahatonga ny faritra midadasiky ny FARC teo aloha ho marefo eo anatrehan'ny milisy sy mpiady anaty akata misintaka.
Satria nivezivezy nanerana ny Twitter ny tenifototra #ALeaderInMyPlace, nanokatra ny sehatr'izy ireo amin'ny takelany ao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra indrindra ho an'ireo mpitarika ara-tsosialy ireo mpanao gazety vitsivitsy. Ohatra, Patricia Lara Salive avy ao amin'ny El Espectador namoaka lahatsoratra iray avy amin'ilay mpahay toekarena Afro-Kolombiana sady mpiaro ny tontolo iainana, Sofía Garzón, lahatsoratra momba ny ady hiarovana ny reniranon'i Ovejas manoloana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna.
Ao Semana, Antonio Caballero, mpanao gazety, nanome ny sehany ho an'i William Orozco, izay miasa amin'ny fiarovana ny zon'ny tantsaha, ary tsy maintsy niafina lavitry ny tranony efa ho herintaona taorian'ny nahazoany fandrahonana tamin'ny jolay 2018.
Mpanao gazety Vanessa De La Torre Sanclemente nanome ny takelany ao amin'ny gazety Cali El País ho an'i Diana Jembuel, mpitarika ara-tsosialy avy amin'ny vahoaka indizeny Misak, izay miasa ao amin'ny onjam-peon'ny fiarahamonina eo an-toerana. Mitantara ny fifandonana teo aloha izay niainany fito taona lasa manoloana ireo mpikambana ao amin'ny FARC izay naka an-keriny olona avy ao amin'ny fiarahamoniny i Jembuel.
Mampiseho ny fomba namelan'ny governemanta Kolombiana ireo mpitarika ara-tsosialy sy vondrom-piarahamonina ara-poko vitsy an'isa ho eo ambany vahohon'ireo vondrona mpiady anaty akata nandritra ny taona maro ny tantarany:
Nanapa-kevitra hangataka fanampiana amin'ny fiteniko aho, tamin'ny alalan'ny onjam-peo an-toerana. Nisy nihaino aho ary nanampy ahy ny rehetra […] norahonan'ireo mpiady anaty akata ny fiarahamoninay ary tsy navelanay hanao izany izy ireo. Nalain'izy ireo ny namako. Nanambana basy taminy ry zareo ary niteny ratsy anay.[Avy eo], nangataka fanajana tamin'izy ireo izaho irery, miaraka amin'ny etamazaoro mba hamela azy handeha […] Hatramin'ny nanomezako ity hafatra ity. Dia tsy feo vitsy intsony izahay, fa feo marobe mitambatra milaza hoe “ampy izay.”
Noraisin'ireo manampahefana ihany koa ny hetsika, toy ny Lehiben'ny Fampanoavana ao amin'ny firenena izay nanome ny sehany antserasera ho an'ilay nahazo ny Loka Goldman hoan'ny Tontolo Iainana, Francia Márquez. Nanao tahaka izany ihany koa ny masoivoho ho an'ny Vondrona Eoropeana ao Kolombia tamin'ilay mpitarika Afro Kolombiana, Marino Córdoba, ary tamin'ny 21 May, loholona vitsivitsy no nanolotra ny sezan'izy ireo tamin'ireo mpitarika ara-tsosialy tao amin'ny Antenimiera:
Androany miaraka amin'ny fanentanana #ALeaderInMyPlace, nomena ireo mpitarika ara-tsosialy ny sezanay ao amin'ny Vaomiera Faharoa an'ny Antenimieran-doholona. Notarihin'i Mayerlis Robles, mpitarika ao Montes de María, izay vao niaritra fanafihana vao haingana ny vaomiera.
Fikambanana mpiaro ny zon'olombelona, Dejusticia ao Bogotá nilaza tamin'ny Latin America Reports fa zava-dehibe ho “fiarovana sy fanomezan-toerana ho an'ny tanora amin’ ireo mpitondra ara-tsosialy ao amin'ny firenena” ny fanentanana. Niteraka resadresaka sy fahalianana marobe ny fanentanana, indrindra raha namaly izany ny solontenan'ny governemanta. Mbola misalasala ihany ny feo sasany, na izany aza, satria ezaka kely fotsiny ihany ity raha ampitahaina amin'ny zavatra tena ilaina mba hampitsaharana ny fandrahonana ireo mpitarika ara-tsosialy. Mpisera Twitter, David Racero namintina izany toy izao:
Ahoana raha manome ireo fiara mifono vy ampiasain'izy ireo toy ny taxi ho an'ireo mpitarika ara-tsosialy sy mpiaro ny zon'olombelona ny Kongresy sy ny mpanolotsaina ao Bogotà izay tsy mba iharan'ny fandrahonana, satria atahorana ny ain'izy ireo [mpitarika ara-tsosialy sy mpiaro ny zon'olombelona] ary finday sy salotra tsy laitram-bala ihany no fiarovana azy ireo